Ndezvipi zvinokanganisa zvakatambirwa nevanhu kubva kuE-commerce? | ECommerce nhau
Ndezvipi zvinokanganisa zvakatambirwa nevanhu kubva kuE-commerce?
Encarni Arcoya | | Zvekutengeserana zvemagariro
E-commerce Icho chave chiri chimwe chezvinhu zvikuru zvakagadzirwa mumakore achangopfuura, apo ini ndinogadzira nzira inosvikika yekutsvaga nekutengesa zvinhu mukati mekusvikira kwekubaya kamwe chete.
El kuvandudza uye kugadzira Iri basa rakakura rakakanganisa nzanga munzvimbo dzaro dzakasiyana, tobva tatsanangura kuti sei uye kupi kwakaitika izvi.
1 Kukanganisa pamusika uye vatengesi
2 Mhedzisiro padanho rebasa
3 Zvemagariro kukanganisa
Kukanganisa pamusika uye vatengesi
E-commerce yakagadzira nharaunda yakasimba makwikwi emari, kumisika, zvichipiwa kuti vanhu vanogona kutengesa zvavanotengesa nemutengo wavo wakatarwa, zvinokanganisa musika wese nevashambadzi vanofanirwa kutengesa zvinhu nemutengo wakatarwa uye wakatarwa. Iko kuchinjika kwekugona kuisa yako mutengo Ruzivo rwemunhu nezve zvinyorwa zvako mukana wakakura watinopihwa nemawebhusaiti, asi kune mumwe wavo chinhu chakanakira mimwe misika.
Pamusoro pezvese zvataurwa pamusoro apa, eCommerce yakavhura mukana wekuti vanhu vazhinji vave nechitoro chavo chepamhepo uye vatengese zvigadzirwa zvavanazvo, kunyangwe zvakagadzirwa naivo kana nekushanda nevanozvigovera uye vanotengesa. Mune mamwe mazwi, ikozvino avo vane eCommerce havafanirwe kunge vari vanhu vakadzidza kuti vatange bhizinesi, asi vanotsvagawo kuwana imwe kupera kwemwedzi nemirairo yepamhepo.
Kune izvo zvinofanirwa kuwedzerwa, pakati pezvimwe zvinhu, iyo stock kushanduka. Uye ndezvekuti, eCommerce isati yatanga kushanda, kuve nechitoro kwaida nzvimbo yekutengesa uye imba yekuchengetera kuti ugone kuchengeta zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana kuti uzvitengese. Nekudaro, neCommerce zvitoro zvave kudzikira, dzimwe nguva ndinonzwa kubviswa zvachose. Izvi zvinodaro nekuti vazhinji vanoshanda pasi pemamwe masisitimu ayo zvigadzirwa zvinotumirwa zvakananga nekambani inozvigadzira, vachiita sevarevereri.
Iko kusununguka kwekuti eCommerce inogona kumisikidzwa nhasi kwave zvakare nekukanganisa pamusika, kunyanya kana tichifunga kuti pari zvino pane makwikwi makuru mumusika wepamhepo. Izvo zvakatokanganisa musika "wepanyama" mupfungwa yekuti zvitoro zvakavharwa, dzimwe nguva zvichikoshesa bhizinesi repamhepo pane zvepanyama. Sei? Nekuda kwemitengo inogona kudzivirirwa senge kubhadharisa nzvimbo, mutengo wemagetsi, mvura, nharaunda, nezvimwe. pamwe nekuve nekuchengetedza, stock yekusiya, nezvimwe. izvo zvinogona kupedzisira zvanyudza muzvinabhizimusi, kunyanya kana ari mudiki.
Chimwe chinhu chekutarisa nezvakakanganisa iko mukana wekusvika zvakanyanya kune vatengi kupfuura nebhizinesi remuno. IInternet inopa mukana weCommerce kuzivikanwa, kwete chete muguta umo muridzi, asi muSpain yese uye kunyangwe kunze kwenyika, pasirese, ichivhura musuwo kune vamwe vashandisi vanogona kufarira izvo zvinoita. Kana kutoda kuisa mari mune iro bhizinesi. Naizvozvo, iri hukuru hukuru mukuzadzisa zvinangwa zvekunze kwenyika, nekuti kunyangwe isina kuiswa mari mairi, kana iri bhizinesi rinokanganisa, rinongosvika kune dzimwe nzvimbo dzepasi.
Mhedzisiro padanho rebasa
ari mawebhusaiti ayo akatsaurirwa kuE-commerce ivo sosi huru yekushomeka kwemabasa nekushaiwa basa. Kugadzirwa kwenzvimbo dzinowanda uye dzakadai, kunoumba kukosha kwekushandisa vanhu vakadzidziswa kuti vakwanise kubata, kutonga nekudzikamisa masaiti aya, asi nenzira imwecheteyo izvi zvinokanganisa mabasa ane rudzi rwechinyakare rwekutenga nekutengesa, achivashandura. munzira yechinyakare yekuwana nekutengesa zvinhu.
Fungidzira kuti iwe une chitoro chemuviri uye chitoro chepamhepo. Muchitoro, unogona kunge wahaya vamwe vashandi kuti vakubatsire kuitakura; Ipo, muCommerce, iwe unenge wave nerubatsiro kumisikidza webhusaiti, chitoro, uye zvirinani iwe unenge uine webhu maneja pamwe neCommunity Manager uyo anotora nyaya yemagariro network. Sezvishoma.
Ese aya mabasa anogadzirwa, pamwe nevamwe vakasarudzika muInternet midhiya senge vanyori, vanyori vekunyora, kushandira vatengi, nezvimwe. Chii chinofungidzira kuwedzera kwemabasa muCommerce.
Dambudziko nderekuti, Sezvo eCommerce iri kuwana mibairo mikuru, uye mune dzimwe nguva inodarika chitoro chemuviri, zvinokuvadza. Ndokunge, vanamuzvinabhizimusi vari kudzikisa vashandi vezvitoro, kana kutovhara zvitoro kana vane akati wandei akavhurika, nekuti hazvivape mari kana vakaisa pachiyero chimwe chete chavanoita nechitoro chepamhepo sekune chitoro chaicho.
Neichi chikonzero, zvinonzi eCommerce ndiko kunounza basa nekushaikwa kwemabasa. Kune rimwe divi, rinoshandisa mamwe marudzi evashandi, avo vane hunyanzvi munyika yepamhepo. Kune rimwe divi, rinobvisa basa revanhu vari situ, ndiko kuti, ezvitoro zvinoona zvinoitwa zvavo zvichiderera uye zvinoramba zvichingova «nzvimbo dzemisangano». Muchokwadi, vamwe vanoguma vachichinjanisa bhizinesi ravo. Semuenzaniso, mune iyo shopu yezvirimwa, ivo vanogona kutora makosi, misangano, masterclass ... kukurudzira vanhu kuti vaende kuchitoro chemuviri (kana ivo vanogona kutozviita online).
Zvino, rimwe rematambudziko makuru mukushanda neCommerce nderekuti, kunyangwe vanhu vane imwe uye vachida rubatsiro kutsvaga vashandi, ivo havasi vanobhadharwa navo, izvo zvinobatsira hupfumi hweB kana chokwadi chekuti Ndiwo mushandi anofanirwa kunyoresa semunhu anozvishandira kuti agone kuunganidza zviri pamutemo (vamwe vanhu vanomanikidza kuhaya panguva ino), nokudaro zvichikonzera dambudziko rakawedzerwa kuvashandi, rinova rekubhadhara iwo wega mari mwedzi nemwedzi (iyo dzimwe nguva inonyura zvakanyanya nekudzikisira chii chinobhadharwa nezvakatambirwa) uye ndicho chikonzero nei vashandi vazhinji veInternet havagone kuvimba nemutengi mumwe chete.
Nekukurumbira uko masayiti aya akakura, zvisingaverengeke mhando dzekutengeserana dzakaonekwa, senge chaiwo mabhangi, kushambadza pamawebhusaiti uye kugadzirwa kweiyo nyowani mhando yemari (Bitcoin). Kungoti hunyanzvi hwagadzirwa, nzanga inoedza kuchinjira kune izvi zvitsva zvigadzirwa, ichigadzira nekuvandudza chaiwo maitiro anogona kubatsira kufambisa iyo yekutanga kugadzirwa kana, mune ino kesi, E-commerce mawebhusaiti. Sosaiti ichagara ichiwana nzira yekuenderana nehunyanzvi.
Pamberi, eCommerce yakanga isiri iyo nzvimbo iyo vanhu vazhinji vaida kutenga. Muchokwadi, pakatanga kuoneka zvitoro zvepamhepo, vanhu vazhinji vaizeza kutenga online nekuda kwezvikonzero zvakati.
Ichokwadi che kuve nekuisa yako data, nekuti vanhu havana kuvimba nezvingaitwe neiyo data kana kana ma hackers kana vamwe vanhu vaikwanisa kuiwana.
El tenga chigadzirwa usati watanga kuchiona, kana zvimwe zviedze. Naizvozvo, zvitoro zvekupfeka zvaive zvakanyanya kunetseka kubudirira, pamwe nezvimwe zvigadzirwa zvaida kuti uedze chimwe chinhu kuti uzive kana zvirizvo zvawanga uchitsvaga kana kwete.
Mubhadharo. Zvitoro zvakawanda zvakatanga nemakadhi ekubhengi kubhadhara, asi munguva pfupi yaifanira kugonesa mari pakuendesa nekuti vanhu vaisavimba kupa yavo kadhi nhamba. Nekudaro, kubhadhara kana uchinge wawana odha kumba kwaidhura, saka vazhinji vakasarudza kuenda kuchitoro "cheupenyu hwese" uye kunotenga imomo.
Nekufamba kwenguva, uye nekugadzwa kweCommerces, pamwe nemukana wekuwedzera mafomu ekubhadhara, izvi zvakagadziriswa. Izvo zvakabatsirawo chokwadi chekuti chitoro chepamhepo chinogona kuve nemhando dzakasiyana siyana dzezvigadzirwa, vamwe kunyange izvo zvisati zvamboonekwa muzvitoro zvepanyama. Izvi zvinoita utsva, uye mavambo, pesvedzero kana uchiisa odha.
Ichokwadi chekuve nezvigadzirwa zvisati zvamboonekwa, zvezvinoitika (nekuti kana iwe ukahodha chigadzirwa chisiri muchitoro unofanirwa kumirira mazuva mashoma kuti uve nacho, muCommerce mumaawa 24-48 unacho. kumba), kuigamuchira kumba usingatombotama ... yaive nesimba rakawanda pane izvo zvemagariro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zvekutengeserana zvemagariro » Ndezvipi zvinokanganisa zvakatambirwa nevanhu kubva kuE-commerce?
Samuel Fonseca akadaro
Mhoroi, ndanga ndichifarira kwazvo chidzidzo ichi kubva munguva dzino apo basa riri kushoma, mhando iyi yebhizimusi iri kubatsira kupfuura nakare kose.
Pindura kuna samuel fonseca
5 Innovative Ecommerce Mapurogiramu Iwe Unofanira Kuedza
Chii chinofanirwa kutariswa pakuendesa zvigadzirwa?